पैसा टिक्दैन ? पर्समा नभुली राख्नुहोस् यस्तो पाँत, कहिल्यै खालि हुनेछैन तपाईको गोजी ! – Sandesh Press
काठमाडौँ । प्रत्येक व्यक्तिको यो इच्छा हुन्छ कि ऊसँग धेरै पैसा होस् वा कुनै चिजको कमी महसुस नहोस् । तर यस्तै नै होस् भन्ने पनि आवश्यक छैन। तपाईंहरू मध्ये धेरैले दिन र रात कडा परिश्रम गर्नुहुन्छ पैसा, कार र घर बनाउनको लागि। यस्ता कैँयौ मानिसहरू पनि छन् जसले यस्तो चाहना राख्ने गर्दैनन्। कैँयो को यस्तो भनाइ पनि हुन्छ कि धेरै पैसा नहोस् तर आफु र आफनो परिवारलाई पाल्न र खुशी राख्न काफी होस् । कैँयौ मानिस पैसा कमाउन कडा परिश्रम गर्ने गर्दछन् भने कति गलत बाटोमा जाने पनि गर्दछन् ।
धेरै पटक यो हुन्छ कि तपाईले धेरै पैसा कमाउनु त हुन्छ, तर तपाईंसँग त्यो पैसा टिक्ने गर्दैन । अर्को शब्दमा, मानिसहरूलाई पैसा राख्नको लागि सही तरीका थाहा छैन। भनिन्छ कि पैसा केवल त्यस्तो व्यक्तिको हातमा मात्रै टिक्ने गर्दछ जसबाट माता लक्ष्मी खुशी भएकी हुन्छिन् । यदि लक्ष्मी माता तपाईसँग खुशी छैनन् भने तपाईको हातमा जति मेहेनत गरेपनि पैसा टिक्दैन ।
तपाईंले आजको युवा पुस्तालाई भनेको सुन्नुभएकै होला कि उनीहरूसँग कहिल्यै पैसा टिक्ने गरेको छैन। यस समस्याबाट छुटकारा पाउन धर्मशास्त्रमा थुप्रै साना साना उपायहरू उल्लेख गरिएको छ, जसको उपायले तपाईले पैसाको कुनै अभाव भएको महसुस गर्नुहुँदैन र तपाईंको पर्स सधैं पैसाले भरिन्छ। आज हामी तपाईंलाई त्यस्तै एक पातको बारेमा बताउन लाग्दैछौं, यदि तपाईंले यसलाई तपाईंको पर्समा राख्नुभयो भने, तपाईंलाई कहिले पनि पैसाको अभाव हुनुहुनेछैन।
यदि तपाईंले आफ्नो पर्समा पीपलको पात राख्नुहुन्छ भने तपाईको पर्समा पैसाको अभाव कहिल्यै हुँदैन। धार्मिक ग्रन्थका अनुसार भगवान विष्णु पीपलमा बस्छन्, त्यसैले सबैभन्दा पहिले पीपलको पात लिएर गंगाको पानीले राम्ररी धुनुहोस्। यस पछि, केशरको साथ यस मा श्री लेख्नुहोस्। अब तपाइँको पर्समा यसरी राख्नुहोस् कि कसैले पनि देख्न नसकोस् या कसैको पनि त्यस पातमा आँखा नपरोस् । समय-समयमा पाँतलाई परिवर्तन गरिरहनुहोस् । यो गरेर तपाईले धेरै फाइदा लिनुहुनेछ र तपाईको पर्स कहिले पनि खाली हुनेछैन ।
Prevमहिलामा यी ६ कारणले हुने गर्दछ बाझोपन, यस्ता छन् सुरुवाती लक्षणहरु